Kedu ka ntanetị gbanwere na ntanetị | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnụbeghị, Amazon na-emepe nnukwu netwọk nke ụlọ ahịa gbapụta na nnukwu ụlọ ahịa US, yana ụlọ ahịa iri abụọ na otu dị na steeti iri abụọ na-emeghe. Ike nke mkpọsa na-aga n'ihu na-adọta ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eji uru azụmaahịa dị n'ịntanetị eme ihe, ịnwe ngwaahịa na mmadụ ka na-ebu elu na ndị na-azụ ahịa. N'ezie 21% nke ndị mmadụ na-azụ ahịa mgbe ịchọchara mpaghara na 12% nke ndị a na-eme n'ime ụbọchị 25
Hasntanetị agbanweela otu azụmahịa si arụ ọrụ na ụlọ ahịa ndị ahịa ruo mgbe ebighị ebi. Site na ihe dị mfe dịka ndị ahịa na-achọ nọmba ekwentị nke ụlọ ahịa n'ịntanetị na mmepe nke Ntanetị Ihe (IOT) - ọnụ ahịa mkpọsa agbanweela n'ụzọ dị egwu. Ọ dị mkpa ka ndị na-ere ahịa na-echekwa ma ọ bụ na-etinye ha n’azụ. Tralọ ahịa Traffic.com
Ihe omuma ihe omuma a sitere na ahia ahia na enye ihe nlere nke otu ntaneti nwere ma g’aga n’ihu igwu egwu na ihe omuma ahia. Ihe ndi a n’ubo gunyere ihụ ebe azụmahịa gi di nma, akara ekwenti, ya na awa ya putara n’ime ihe ichoro na ihe edeputara. Nzọụkwụ ndị ọzọ bụ iji hụ na azụmahịa gị gosipụtara ebe ndị mmadụ na-achọ ngwaahịa gị - dịka na mkparịta ụka mgbasa ozi mmekọrịta.
Na ngwụcha, ọ bụ ikike iji mmekọrịta gị na ndị ahịa gị na-emekọrịta ihe n’ekwentị na ngwa IoT. Otu ihe atụ m na-anọgide na-eji onwe m bụ Keyring mobile ngwa. Ka m na-anya ụgbọ ala, ngwa mkpanaka na-agwakarị m onyinye ma ọ bụ ego m ga-ere na mgbere ahịa nke dị nso.
The Ala nke Intanet nke Ihe ọmụmụ sitere na Accenture Interactive chọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa bu n'obi ịzụta ngwaọrụ ụlọ ejikọrọ site na 2019, ebe a na-atụ anya na ị ga-enwe teknụzụ wearable ka ọ okpukpu abụọ karịa afọ na 2016. Accenture na-ebu amụma na IoT ga-akpaghasị ụlọ ọrụ mkpọsa na atọ ebe:
Ahụmịhe Ndị Ahịa - Ndị ahịa na-eji ekwentị ha ma ọ bụ ngwaọrụ ndị nwere ike wepu ngwa ngwa iji kpọọ ihe ma kpọọ ozi gbasara ngwaahịa, nyocha ma ọ bụ nkọwa mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ahịa na-enweta kupọn dijitalụ nkeonwe ha abanye na ụlọ ahịa ahụ. Ndị ahịa na-eji rọbọt nwere ihu mmetụ maka nchọgharị nchọgharị nke nwere ike iduga ndị ahịa na ngwaahịa ndị achọrọ.
Njikọ mbunye - Smart shelves na-echere na-achọpụta mgbe atọ ndị yiri nkata dị obere. Ndị na-arụ ọrụ onwe ha ga-enyere aka na mpaghara sitere na ntinye ngwaahịa na mgbakọ ngwaahịa na njikwa ihe egwu. Nkwakọ ngwaahịa Smart nke na-enyocha ịdị ọcha ma ọ bụ afọ nke ngwongwo na-emebi emebi.
Ọwa ọhụrụ na ego ha nwetara - Mkpado ego ọnụahịa nwere ike ịgbanwe na ezigbo oge dabere na mkpa ma ọ bụ usoro ndị ọzọ. Site na pantịn ejikọtara, nri ndị bụ isi na-abata mgbe ọ dị mkpa. Ntụziaka ndị a tụrụ aro dabere na ihe ndị dị na ụlọ. Na Ngwa Njikọ nelọ ejikọtara, ntọala na-akpaghị aka / nlekota nke okpomọkụ, ọkụ.
Tags: Accenturee-ere ahịainternet nke iheioteriri Ngakọ Igodokeyring ngwamobile ngwamkpọsa na-anọghị n'ịntanetịretailrevenue ụlọ ahịachekwaa okporo ụzọụlọ ahịanjikọ mbunye